Ukubhala izibhengezo - Ukubhiyozelwa koBomi
Iintatheli ziqala ukujonga ukubhalwa kwemibhiyozo. Emva koko, bathi, i-obit yimiba yakhe endala, ibali lobomi obukade buhlala.
Kodwa iincwadana zentatheli eziziwayo ziyazi ukuba i-obits ingenye yamanqaku anelisayo kunokwenza; bayinika umbhali ithuba lokubhala ubomi bomntu ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, kwaye ngokwenza njalo ukuze ufumane iingqungquthela kunye nengqiqo ejulile ngaphaya kwezinto ezilula zokuphinda iziganeko.
Kwaye, ukulandelwa, emva koko konke, ngaba ngabantu, kwaye akubhalwa ngabantu malunga nantoni na eyenza udaba lweendaba lukhangeleke kwindawo yokuqala?
Ifomathi ye-obit iyamangalisa elula-ibhalwe ngokubhaliweyo njengebali-indaba yeendaba ezilukhuni, kunye neyiphi imilinganiselo emihlanu ye-W kunye ne-H lede.
Ngoko umvuzo we-obit kufuneka uquke:
Xa umntu efile khona (oku kukhethwa ngokukhethwa kukho, kwaye ngamanye amaxesha kufakwe kwisiqendu sesibini endaweni yoko)
Kutheni okanye bafa njani
Kodwa i-obit lede ihamba ngaphaya kwee-5 ze-W kunye ne-H ukubandakanya ukugqitywa kwezinto ezenza ubomi bomntu bunomdla okanye obalulekileyo. Ngokuqhelekileyo kubandakanya oko benzayo ebomini. Ingaba umntu oshonile wayengumlawuli osesikweni okanye umenzi wokuzikhusela, u-obit lede kufuneka azame ukufingqa (ngokufutshane, ngokuqinisekileyo) yintoni eyenza umntu okhethekileyo.
I-leit ye-Obit iquka ngokubanzi iminyaka yomntu.
UJohn Smith, utitshala wezibalo owenza i-algebra, i-trigonometry kunye ne-calculus ezithakazelisayo kwizizukulwana ezininzi zabafundi kwi-Centerville High School, bafa ngoLwesihlanu ngomhlaza. Wayeneminyaka engama-83.
USmith wafa ekhaya eKiderville emva kokulwa nomdlavuza omdala.
Uyabona ukuba lo myalelo uquka zonke izinto ezisisiseko - umsebenzi kaSmith, ubudala bakhe, imbangela yokufa, njl. Kodwa kwakhona, ngokubalwa ngamagama ambalwa, yintoni eyenza ukuba enze izibalo ezikhethekileyo kwizizukulwana zabafundi bezikolo eziphakamileyo .
Ukuba umntu sele efile ngokuguga okanye isifo esimalunga nobudala, isizathu sokufa akapheli ngaphezu kwesigwebo okanye ezimbini kwi-obit, njengoko ubona kumzekelo ongentla.
Kodwa xa umntu efa eselula, mhlawumbi ngengozi, ukugula okanye ezinye izizathu, isizathu sokufa kufuneka sichazwe ngokubanzi.
UJayson Carothers, umyili wemifanekiso owadala ezinye zeempawu ezikhunjulwayo kwiMagazini yeCenterville Times, uswele emva kokugula okude. Wayeneminyaka engama-43 kwaye waba ne-AIDS, wathi iqabane lakhe, uBob Thomas.
Emva kokuba wenze ikhefu lakho, yonke i-obit ingumzekelo omfutshane weakhawunti yobomi bomntu, ngokugxininisa kwinto eyenza umntu onomdla.
Ngoko ukuba uzimisele ukuba umfaki ungumfundisi wezakhono zokudala kunye nokuthandwa kakhulu, zonke ezinye i-obit kufuneka zijolise kuyo.
USmith wayebathanda izibalo ukususela emncinci kwaye wayedlula kulo ngokufunda esikolweni. Wayephakamisa kwimatriki kwiYunivesithi yaseConell waza waphumelela ngeentlonelo ngo-1947.
Kungekudala emva kokufumana i-degree ye-bachelor degree waqala ukufundisa kwiziko lase-Centerville High School, apho waziwa khona ngeentetho zakhe ezizibandakanyayo, ezinomxholo kunye nokusetyenziswa koovulindlela bezinto zokuzonwabisa.
Ubude be-obit buyahluka, kuxhomekeke kumntu kunye nokuziqhelanisa kwabo kuluntu. Ngokucacileyo, ukufa kwaso, kuthiwa, umasipala-dolophu osekuqaleni kwidolophu yakho mhlawumbi uya kuba mude kuneye-janitor yesikolo.
Kodwa ubuninzi bezinto ezivakalayo zingamazwi angama-500 okanye ngaphantsi. Ngoko umngeni kumlobi we-obit ukulinganisa ngokufanelekileyo ubomi bomntu kwindawo efutshane.
Ekupheleni kwayo yonke i-obit yimbalwa kufuneka i-haves, kubandakanywa:
Naluphi na ulwazi olukhoyo malunga neenkonzo zokungcwaba, ukubukwa, njl .;
Uluhlu lwamalungu entsapho osweleyo osweleyo;
Naziphi na izicelo zentsapho zenziwe malunga neminikelo yokuncedisa, ukufundiswa okanye iziseko.
Indlela Yokumisela I-Internet Explorer ukujonga Ikhasi kwiModeli yokuBambisana (okanye Akunjalo)
Idiversithi yeeYunivesithi yaseXianvier
Indlela yokufunda iMpawu eziMandla kwiSetetshi yoMculo
Iimpawu Eziqhayisayo Ngeentuthwane
Ukuguqulelwa kwe-Agricola ngeTacitus